❤️ Sida Instagram kaaga mid gaar ah looga dhigo - Winches Club
Sida Looga Dhigo Instagram-kaga Mid Gaar ah
Waxaan u haynaa maqaal kooban dhammaan Instagrammers kuwaas oo raba inay ogaadaan sida ay akoonkooda Instagram uga dhigi karaan mid gaar ah. Haddii aadan rabin in dunidu ay aragto macluumaadkaaga Instagram, akhri si aad u ogaato sida ay u fududahay in koontadaada Instagram loo rogo kanaal gaar ah oo keliya kuwa raacsan. Qarsoodinimadu waxay la macno tahay inaadan ka werwerin inaad dadka xannibto, waxaad awoodo halkan ku baro.
Waa maxay akoon Instagram gaar ah ?
In Instagram ka dhigista mid gaar ah waxay la macno tahay in koontadaada ay muujin doonto magacaaga iyo macluumaadka aasaasiga ah kaliya marka ay dadku ku raadiyaan.. Qof kasta oo raba inuu arko macluumaadkaaga wuxuu u baahan doonaa inuu ku weydiiyo inuu ku raaco, laakiin ha werwerin, Dhammaan taageerayaashii hore waxay weli awoodi doonaan inay arkaan qoraalladaada xitaa haddii aad si gaar ah u gasho.
Waxaa jira dhowr sababood oo laga yaabo inaad rabto inaad si gaar ah u tagto, tusaale ahaan haddii aad tahay sumad oo aad rabto in aad si gaar ah u siiso macaamiishaada.
Dad badan ayaa sidoo kale go'aansada inay si gaar ah u tagaan si ay u soo jiitaan taageerayaasha., sababtoo ah calaamad gaar ah ayaa inta badan soo jiidan karta dadka, taasoo saamayn ku yeelanaysa kordhinta tirada dadka raacsan.
Waa kan hagaha degdega ah, iyo haddii aad rogto, waxaad ka heli doontaa talaabo kasta oo ay raacaan sawiro:
Aad profile kaaga oo taabo hamburgerka gudaha midig sare
Kadib riix Dejinta
Kadib riix Qarsoodinimada
Kadib riix Qarsoodinimada Koontada
Riix badhanka Koontada gaarka ah
Ka dib waxaa laguu sheegi doonaa inaad dib u eegto taageerayaashaada haddii aad rabto.. Waxaad ka beddeli kartaa qaabka gaarka ah una beddelan kartaa qaabka guud mar kasta oo aad rabto adiga oo ku celcelinaya tillaabooyinkan.
Hadii aad talaabooyinkan si sax ah u raacdo, waa in aad awooddo si fudud u beddel akoon kasta oo Instagram ah in aad wax ka yar hal daqiqo ka xayuubisay. Dejinta Instagram waxay leeyihiin tiro menus ah, laakiin mar haddaad taqaan, fududahay in la maro.
Maqaal horeSida Loo tirtiro Koontada Instagram
Maqaalka XigaInstagram Search Hashtag Tool